Russia oo Rigoorayaal kaga Reebtay Koobka Adduunka xulka Spain+SAWIRRO – Gool FM
Russia oo Rigoorayaal kaga Reebtay Koobka Adduunka xulka Spain+SAWIRRO
CR Shariif July 1, 2018
( Russia ) 01 Luulyo 2018. Martigaliyaasha koobka adduunka ee Russia ayaa gaaray wareega siddeed dhamaadka koobka adduunka markii ay 4-3 Rigoorayaalka ay ku garaaceen qaranka Spain.
Kulanka ayaa lagu kala maray qeybta hore 1-1, waxaana hogaanka kulanka qabtay xulka Spain markii kubbad laadka xorta ah uu soo dhigay Marco Asensio taasoo uu iska dhaliyay daafaca Russia ee Sergei Ignashevich markii uu cadaadis kala kulmay Sergio Ramos.
Laakiin Russia ayaa la timid goolka barbaraha markii uu gacan ku taabtay kubbad daafaca Gerard Pique daqiiqadii 41-aad waxaan rigoorada loo dhigay marti galiyaasha goo u badalay xiddigooda Artem Dzyuba.
Kaambiyaha dambe dheesha waxaa yaraa fursada labada xul inkastoo Spain ay gacan sareysay kulanka,
Waqtigii caadi ee kulnka ayaa ku idlaaday 0-0 waxaan lagu qasban yahay maadama dheeshu ay tahay mid kala baxa in lagu daro 30 daqiiqo oo dheeri ah .
Markii u horeysay taariikhda ayaa la isticmaalay badal afaraad koobka adduunka waxaana noqday laacibkii u horeeyay ee badalkaas ku yimaada xiddiga Russia Aleksandr Yerokhin kaa oo cayaarta soo galay daqiqiadii 97-aad.
Labada xul ayaa isku mari waayay waqtigii dheeriga ee lagu daray cayaarta waxaan ugu dambeyn loo dhigay rigoorayaal.
Spain ayaa bilaawday tuursaha rigoorada kowaad waxaan u dhaliyay Andres iniesta , balse waxaa laga qabtay rigooradooda seddaxaad laacibka Atletico Madrid ee Koke halka Sido kale rigoorada afaraadna waxaa ka qasaariyay xiddiga Iago Aspas.
Waxayna ugu dameyn rigoorayaasha ku idlaadeen 4-3 oo ay guusha ku raacday xulka Russia kaa oo u gudbay wareega siddeed koox.
Tababare Tite oo ka warbixiyay go’aankiisa kaga aadan Marcelo kulanka Brazil iyo Mexico
“Joogitaankeyga kooxda Atletico Madrid, waxaa sabab u ah Diego Godín”	__ Antoine Griezmann